VIDIN-TSOLIKA ETO MADAGASIKARA : Nahitana fiakarana 50 Ariary avy indray
Manao sesilany ny fampiakarana ny vidin-tsolika eto amintsika , izay tsy fantatra mazava ny tena antony. 5 décembre 2018
Omaly maraina no nahitana izany saika nanerana ireo tobin-dasantsy teto an-drenivohitra ary voaporofo fa nitombo dimampolo Ariary avy. Niakatra ho 4200 Ariary ny lasantsy raha toa ka 4150 Ariary izany teo aloha, ny gazoala” lasa 3550 Ariary raha 3500 Ariary teo aloha. Tapitra nimenomenona daholo ireo mpitondra fiara omaly tontolo manoloana io fiakarana tampoka io .
Raha ny fanadihadiana nataonay tamin’ireo fiara mpitatitra dia nivoitra tamin’ny lahatenin’izy ireo fa “ mahatsapa ho matiantoka tanteraka ny fidiram-bolan’izay ireo satria tsy marin-toerana ny vidin-tsolika eto amintsika “. Vao somary variana amin-javatra hafa toy ny fanatanterahana fampielezana-kevitra ny saim-bahoaka dia efa tamy sahady ny fanararaotana hafa , hoy hatrany ireo mpamily. Hatramin’izay fiakarana nisesisesy nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona 2018 izay anefa dia tsy hita mivaingana ny tena fandraisan’ andraikitra avy amin’ny mpitondra fanjakana.
Voatery miaina ao anatin’ny fangirifiriana hatrany ireo izay tsy maintsy hampiasa azy. Manoloana ity fampiakarana vidin-tsolika ity ihany koa dia manahy mafy ny mponina eto an-drenivohitra sao hiafara amin’ny fampiakarana saran-dalan’ny fitateram-bahoaka indray izao. Mila vahaolana ny vahoaka saingy mbola tsy hita popoka izany hatramin’izao. Matetika dia ireo ofisim-pirenena momba ny solika mihitsy no milaza fa miankina amin’ny fiovaovan’ny vidin-tsolika eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena hatrany no mampiaka-midina izany eto amintsika. Azo hitsarana tsara ny tsy fahaiza-mitantana ataon’ireo mpitondra ankehitriny ary tsy azo hivalozany raha ny fidangan’ny vidin-tsolika tsy mety voavaha.
Ny tetezamita aza, izay lazaina hatrany fa tsy ara-dalàna sy tebahana fa mpandrodana fitondrana toa mba nahavita nametraka mazava ny fetra ambony indrindra tamin’ny vidiny zakan’ny mpanjifa teto Madagasikara. Anisany andrandrain’ny besinimaro araka izany ny famahana olana mahakasika ity solika eto amintsika ity rehefa tonga ny fitondrana tarihan’ny Filoham-pirenena vaovao voasafidim-bahoaka.